Toamasina : Jiolahy roa maty voatifitra -
AccueilSongandinaToamasina : Jiolahy roa maty voatifitra
Toamasina : Jiolahy roa maty voatifitra
Tratry ny vela-pandrika. Raikitra ny fifanjevoana teo amin’ny jiolahy sy ny zandary tany Ambalamanasy Toamasina nandritry ny fisafoana, ka lehilahy iray no maty voatifitra rehefa avy nanafika tamin’ny trano iray tao an-toerana ny alin’ny sabotsy hifoha alahady lasa teo.
Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Lietna-kolonely Ranaivoarison Théodule no nahazoana tatitra « fa lehiben’ny jiolahy rain-dahiny ao anatin’izany fikambanan-jiolahy antsoina hoe “Bande des 11”, izay sady mpampihorohoro sy nampitondra faisana ny mponina ity lehilahy 35 taona ity, ary i Talata no anarany. Rehefa naharaisana vaovao fa nanao ny asa ratsiny tamin’ny tokantrano iray tao an-tanàna indray izy no nanaovana vela-pandrika. Ny tatitra avy amin’ny olona tsara sitrapo ihany no nahazoam-baovao, fa misy ireo olona mikasa hanao fanafihana, ka tonga ara-potoana teny an-toerana ny zandary. Nisy araka izany ny fifanomezan-tanana teo amin’ny fokonolona sy ny zandary.
Tokantrano iray no lasibatry ny vaky trano nataon’ity farany io alina io. Ny marainan’ny alahady, vao raikitra ny fikarohana azy rehefa tsy tratra tamin’ny asa ratsiny. Niezaka nitsoaka sy nanohitra i Talata. Naharitra 15 minitra mihitsy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta tamin’izany. Satria moa nisy basy ihany koa teny amin’ity jiolahy, ka namaly tifitra izy ireo. Nitsirara noho ny tifitra variraraka tamin’izany izy , ka namoy ny ainy teo noho eo. Rotidrotiky ny bala mihitsy, rehefa voa mafy teo amin’ny lohany. Efa nalefan’ny polisy tao amin’ny tranom-paty ny razana taorian’izay.
Talohan’io, nahazo vokatra koa ny « Opération Mandio », araka ny fampitam-baovao nataon’ny kaomandan’ ny vondron-toby any amin’ny faritra Atsinanana hatrany. Tovolahy iray nandeha posy no naharaisana fitarainana fa nodarohan’ny mpitondra azy, izay tsy iza fa olona mpitarika posy nitondra azy ihany no nahavanona ny loza. Nendahina ary novonoina mihitsy ralehilahy ka naratra mafy. Teny Mangarivotra ny zoma lasa teo no nitranga izany, ka naratra mafy ilay olona nendahiny, ary manaraka fitsaboana ao amin’ny Hopitaly Be taorian’ny fahavoazany. Nanao ny fanarahan-dia avy hatrany ny zandary taorian’ny fampandrenesana azy, ka maty voatifitra tamin’izany ity mpitarika posy iray ity. Nomarihan’ny mponina any an-toerana fa misy amin’ireo jiolahy tokoa no mialokaloka amin’ny fitondrana posiposy sy bisikileta amin’ny alina nefa manao asa ratsy no tena fivelomana.
Hotanterahina amin’ny faha- 05 sy ny faha-6 ary ny faha-07 ny volana marsa 2018 etsy amin’ny Carlton Anosy ny andiany faharoa amin’ny “AICT”, na ny “Assises de la Coopération Internationale des Collectivités Malagasy et Françaises”, ...Tohiny